यौन काण्डको बयानको क्रममा चिप्लिए महरा, दुइथरी बयान दिएपछि अब महरालाइ के हुन्छ ? – Sanghiya Online
काठमाडौं, कात्तिक ५ । रोशनी शाहीलाई कोठामै पुगेर रक्सी सेवनपछि बलात्कारको प्रयाश गरेको र अस्वीकार गर्दा कुटपिटको आरोप लागेका तात्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिवादास्पद बयान दिएर फेरी चर्चामा आएका छन् । शाही बलात्कार प्रकरणमा महराले प्रहरी समक्ष दिएको बयान प्रश्नैपिच्छे बाझिएको छ । पक्राउ परेको लामो समयसम्म स्वास्थ्य अवस्थाका कारण बयान दिन अस्वीकार गरेका महराले पछिल्लो पटक बयान दिन तयार भएका थिए । बयानका क्रममा शाहीको डेरामा भेटिएको भाँचिएको चस्माको बिषयमा पनि महरा चिप्लिएका छन । पहिलो पटक आफ्नो चस्मा नभएको बताएका महराले दोस्रो पटक पुरानो चस्मा देखाएर फसाउन खोजिएको बयान दिएका छन् । घटना घटेको पर्सिपल्ट अर्थात असोज १४ गते प्रहरीले शाहीको डेराबाट रक्सीको बोतल, शाहीसँगको घम्साघम्सीमा महराको भाँचिएको चस्माको खुट्टा, उनको जुत्ताको तलुवा लगायतका प्रमाण संकलन गरेको थियो । महराले भाँचिएको त्यही चस्माको खुट्टा आफ्नो पुरानो चस्माको भएको बयान दिएका हुन । ‘सुरुमा मेरो चस्मा लगाएकै छु, त्यो चस्मा मेरो हैन भन्ने बयान दिनुभएको छ, फेरि आफ्नो पुरानो चस्मा देखाएर फसाउने षड्यन्त्र भयो भन्ने कुरा पगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
महराले आफ्नै भनाईलाई काटेको पुष्टि भएको छ । ती अधिकृतका अनुसार घटना भएको दिन असोज १२ गते साँझ शाहीको कोठामा पुगेको भनेका महराले सो दिन आफू शाहीको घरमा जाँदै नगएको बयान दिएका हुन । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं स्रोतका अनुसार प्रहरीसमक्ष बयानको क्रममा महराले प्रहरीले बरामद गरेका सवुतसमेत झुटा भएको भन्दै घटना घटेको दिन आफू रोशनी शाहीको डेरा रहेको घर नजिकसम्म मात्रै पुगेको तर घरभित्र नगएको जनाएका हुन । रोशनी शाहीसँगको सम्बन्धबारे भने महराले पारिवारिक सम्बन्ध रहेकोले आउजाउ भइरहने बताएका छन ।
आफूहरुबीच पारिवारिक सम्बन्ध रहेको कारण आउजाउँ भइरहने र सो दिन रोशनीसँग झगडा परेकोले सम्झाउन गएको तर शाहीको फोन नउठेपछि घरभित्र नगई फर्किएको महराले बयान दिएका छन । तर सो दिन सिसिटीभी फुटेजमा भने महरा एक घण्टा १९ मिनेट शाही बस्ने घरमा रहेको देखिएको छ । ‘रोशनी शाहीसँग दिउँसोदेखि झगडा परेकोले सम्झाउनका लागि भेट्न जान लागेको थिएँ, तर फोन नउठेपछि घरभित्र नछिरी फर्किएको स्रोतले बताएको छ । के बिषयमा झगडा परेको हो भन्नेबारे भने महराले केही खुलाएका छैनन । सिसीटीभि फुटेजमा लगभग सवा घण्टा महरा घटनास्थलमा रहेको देखिएपछि महराले सो क्षेत्रमा पुगेको तर घरभित्र नगएको बताए पनि त्यक्ति धेरै समय कहाँ बसे भन्ने खुलाएका छैनन । घटना भएकै राती शाहीले फोन गरेपछि उनको कोठामा पुगेर प्रहरीले शरीरमा लागेका घाउचोट र बयान रेकर्ड गरेर फर्किएको थियो ।
रौतहटको धर्मपुरमा एक दिने निशुल्क बाली स्वास्थ्य उपचार शिविर सम्पन्न ।
उपेन्द्र यादव सांसद तान्न साम, दाम, दण्ड, भेद सबैको प्रयोग गरेको खुलाशा ! नमाने धम्कि